Gawaarida Gawaarida Waawayn ee Shiinaha LH5002 oo ay weheliso soo saaraha saxarada suulasha ee baarka ah iyo alaab-qeybiye | Duoduo
Gawaarida Xamuulka culus ee LH5002 oo leh Saxar Faraha Dheer
Cabbirka Furmay: 51 × 55.5x127CM
Cabbirka La Laabay: 30 × 55.5X100CM
Baaxadda Saxanka: 24.5x38CM
Awoodda: 150 KGS
Gawaarida gacanta culus ee culus, oo ku habboon isticmaalka bakhaarka. Saxanka waa la laaban karaa, sidoo kale xamuulka gaariga xamuulka ah ayaa lagu hagaajin karaa midka kore iyo kan hoose, wuxuu keydin karaa boos wuxuuna si weyn ugu raaxeysan karaa nolol maalmeedkeena.
Si fudud u laab, si fudud loo isticmaali karo.
Naqshadaynta qaabeynta "P" raaxo leh.
Saxan ballaaran oo suul ah.
Waajibaad culus oo alxammay iyo dariiq dhexaad ah oo la beddeli karo.
Xarumaha saamaynta sare leh goos gooska kubbadda xiran
Gaadhigan gacanta lagu qaado oo qaadaya 150kgs ayaa loogu talagalay isticmaalka maalin kasta. Dhismo tayo sare leh oo leh saxan suul luga leh oo culeyskiisu culus yahay ayaa bixisa cimri dherer la isku halleyn karo iyo si fudud alaab culus. Gawaaridan gacan ku habboon ayaa leh taayirro caag ah oo si siman isu rogaya iyo gacan qabsi badbaado oo u eg P. P-mimu wuxuu kuu oggolaanayaa hal ama laba hawl gacmeed. Waxay leedahay tuubbo xoog iyo adkaysi dheeraad ah. Dhererku wuxuu bixiyaa codsiyo hi-sargoyn heer sare ah. Saxanka ballaaran ee suulku wuxuu u oggolaanayaa daabulidda alaab waaweyn oo waaweyn. Gawaarida gawaarida ayaa ka ilaaliya culeyska taayirrada. Taayirada adag ee daalka huwani weligood ma siman yihiin. Dhamaadka jaakada budada waxay bixisaa cimri dherer ugu badnaan.
Dhabarkaaga badbaadi marka aad dhaqaajineyso ama aad wax ka qabaneyso qalabka guryaha culus iyo alaabada kale ee waaweyn naftaada. Qalabka Buffalo 150kgs dolly truck truck culus ayaa kaa caawin doona inaad qaboojiyaha, dhaqe, iyo qalajiyaha ka soo qaadatid dhabarka gaarigaaga si fudud gurigaaga. Saxanka ballaaran ee suulasha leh oo siinaya culeysyo badan oo bir ah oo aad ku fariisato. Naqshadda ku habboon ee P wax ka qabashada waxay ka dhigeysaa cunugga mid fudud oo la qabsan karo iyo dhaqdhaqaaq. Faafinta ballaaran ee cagta, oo siineysa culeysyo badan oo xasillooni iyo taageero ah. Baabuurkan xamuulka qaada ee culus ayaa loo dhisay inuu sii jiro. Naqshadeynta waxay leedahay qori wareegsan oo gawaarida la beddeli karo, iyo hal inji oo dhexroor bir ah oo dhejis ah.
Hore: DuoDuo Duty Hand Druck Truck LH5001 Dual Handle Hand Truck
Xiga: Hawlaha DuoDuo Multi Folding Wagon DX6001with Universal Wheels & Handle hagaajin
Gawaarida Xamuulka ee Ugu Fiican
Waajibaadka culus ee Gawaarida Gacanta loo Beddeli karo
Gawaarida Waaweyn ee Isku-laaban
Gawaarida Gacanta culus
Hawl culus Dolly Hand
Trolley Hand Duty culus
Gawaarida Gawaarida Duty culus 300kg
Gawaarida Waawayn ee Dukaanka Gacanta Dolly
Gawaarida culus ee culus oo 300Kg ah
Trolley fuulitaanka Jaranjarada Waajibaadka culus
Gawaarida Xamuulka culus ee Dolly
Birta Dolly Cart
DuoDuo 3 1 aluminium aluminium xamuul gacan ...
DuoDuo Gawaarida Waawayn ee Gawaarida Gawaarida LH5005 oo Dheeraad ah ...
DuoDuo farsamo gacmeed badan oo LH5006 Converti ...
DuoDuo culus Duty Hand Truck LH5001 Dual qabashada ...